Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny firafitra bioethanol | Fanavaozana maintso
Ny olana ara-tontolo iainana mitohy ateraky ny sifotra mandritra ny fampiasana tsy tapaka amin'ny ririnina dia mahatonga antsika hitady solika tsy manimba kokoa noho ny fanafanana antsika. Nandritra ny taona maro, bioethanol dia lasa iray amin'ireo solika malaza indrindra ao an-trano. Noho izany, fatana bioethanol nanjary iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny fanombohan'ny ririnina eny an-tsena izy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny toetra rehetra ananan'ireo firavaka bioethanol sy ny fomba tokony hampiasanao azy ireo.
1 Afon-tsolika bioethanol
2 Fahombiazan'ny fatana bioethanol
3.2 lafiny ratsy
4 Fiarovana amin'ny lafaoro bioethanol
Rehefa manapa-kevitra ny hividy tafo famonoana bioethanol ianao dia diniho aloha ny zavakanto kanto amin'ny masontsivana marobe izay hamaritra ny kalitaon'ny vokatra. Iray amin'izany ny fanjifana solika. Ny tanjon'ny fividianana mahomby dia ny fananana ny fanafanana amin'ny fomba ara-toekarena indrindra nefa tsy very kalitao. Ny vola laninay amin'ny fividianana ity fatana bioethanol ity lafin-javatra lehibe iray tokony horaisina izany.
Ny fihinanana bioethanol amin'ny am-patana dia miankina amin'ny haben'ny fatana, ny isan'ny mpandoro ary ny fisokafan'ny lelafo. Parehitra manan-danja iray hafa tokony hodinihina dia ny hery. Arakaraka ny habetsaky ny herin'ny amina am-patana, dia vao mainka handany izany amin'ny fotoana hafa. Soso-kevitra ny hananana fifandanjana tsara eo amin'ny herinaratra sy ny fihinanana fatana fandoroana.
Fampahalalana iray lehibe hafa dia ny habeny. Arakaraka ny haben'ny vokatra resahina dia vao mainka mandany azy mandritra ny fampiasana. Midika izany fa tsy maintsy fantarintsika ny fomba hisafidianana fatana fandoroana mifanentana amin'ny haben'ny efitrano tianay hafanaina sy ny teti-bolantsika.
Fahombiazan'ny fatana bioethanol
Fanontaniana iray manontany tena ny olona maro raha toa ka mahavita manome hafanana marobe ny fireplaces. Ity karazana fandidiana ity na tsy fandosirana fotsiny amin'ny fanafanana ny efitrano misy antsika, fa azo ahitsy koa mba hanafanana ireo efitrano hafa amin'ny fotoana iray. Ny iray amin'ireo olana lehibe dia ny tsy azo ampiasaina ho fanafana lehibe.
Izy io dia karazana fatana fandoroana natao hametrahana ny iray amin'ireo efitrano izay andaniantsika fotoana betsaka indrindra amin'ny faran'ny andro. Miankina amin'ny herin'ny habe sy ny haben'ny vavony dia ho afaka hanome hafanana bebe kokoa na latsaka. Ny herinaratra mahazatra indrindra izay mazàna ao anatin'ireny firafitra bioethanol ireny dia ny 2KW. Noho io hery io dia ahafahantsika manafana efitrano 20 metatra toradroa eo ho eo. Miankina amin'ny haben'ny efitrano no ahafahantsika mahafantatra ny hery tokony hananantsika sy ny vidin'izany.
Hanao famakafakana kely momba ny tombony sy fatiantoka ny fatana bioethanol izahay. Azo antoka fa ireo tombony sy fatiantoka ireo dia hanana oscillation miankina amin'ny fampiasana izay homentsika azy. Tsy maintsy dinihintsika ihany koa ny efitrano ao an-trano, ny firafitra ary ny toetrandro any ivelany. Na izany na tsy izany, hamintina ireo tombony lehibe sy fatiantoka lehibe isika:
Fatana ara-tontolo iainana izy ireo ary mora apetraka. Ny iray amin'ireo drawbacks fahita mahazatra dia ny fametrahana azy sarotra. Ny filàna asa ivelany sy ny fotoana fametrahana maharitra dia mety hahatonga ny olona hieritreritra indray ny fividianana azy.
Tsy mila fitrandrahana na fantson-drivotra izy ireo. Raha tsy mila ireo kojakoja ivelany ireo dia mora kokoa ny fametrahana sy ny fikojakojana azy.
Manana hafanana tsara ary mahatratra azy haingana. Ho an'ireo olona tsy manam-paharetana rehefa te-hanafana, miaraka amin'ity afon'afo ity ianao dia afaka mahatratra hafanana mahasalama ao anatin'ny fotoana fohy.
Izy ireo dia mitondra famolavolana fanampiny tsara ho an'ny trano. Tsy ny fiasan'ny fanafanana fotsiny no ilaintsika fa mila azy io, fa afaka manampy amin'ny haingo koa.
Tena azo antoka izy ireo ary mora ampiasaina. Tsy tokony hanahy momba ny ankizy isika noho ny tsy fahitana azy. Izy io dia karazana fatana fandoroana azo antoka.
Tena mora ny vidiny.
Zara raha misy fikojakojana azy ireo.
Ny solika bioethanol dia somary lafo kokoa noho ny lasantsy hafa. Amin'ny maha-solika ekolojika azy dia mbola ambany ny fangatahana sy ny haavon'ny famokarana sarotra kokoa. Raharaha fotoana iray vao ahena ny vidin'ny bioethanol.
Tsy mamoaka karazana vazivazy na lavenona akory izy io fa mamofona fofona azo tsikaritra ihany.
Ny fahaizana manafana ny efitrano dia voafetra kokoa. Mba hanatsarana ity fanafanana ity dia mila haavon'ny oksizena ampy ianao mba hisorohana ny fihoaram-pefy CO2 avo lenta.
Ny halavirana farafahakeliny tokony hanananao amin'ny fanaka dia iray metatra. Izany dia mahatonga ny efitrano tsy maintsy ho lehibe.
Fiarovana amin'ny lafaoro bioethanol
Rehefa miresaka momba ny afo sy ny fanafanana isika dia matetika no mipetraka ny fanontaniana hoe azo antoka ve ity fametrahana ity na tsia. Ny fatana bioethanol dia azo antoka satria manana famonoana tena tsotra. Maro amin'ireo maodely no manana mpiaro sasany ka tsy afaka mandoro antsika tsy nahy ny antso. Noho io antony io dia lasa karazana fametrahana izay ambany kokoa ny haavon'ny loza noho ny fatana fandoroana hazo nentim-paharazana. Izany dia noho ny tsy fisian'ny alikaola na kitay mirehitra ihany koa dia ahiana ho faty izany.
Mba hahatonga ny fatana bioethanol ho azo antoka tanteraka, tsy mila manaja ny halaviran'ny fiarovana isika amin'ny metatra miala amin'ny fanaka. Atao amin'ny hafanana ihany izany. Ny tsimokaretina tsirairay dia manana fahaizan'ny tanky ary miankina amin'ny haben'ny setroka izany. Miankina amin'ny zavatra azontsika omena, ny fandoroana bioethanol dia haharitra ela na latsaka.
Ny iray amin'ireo anton-javatra tokony hodinihina dia ny fihinanana bioethanol sy ny hamafin'ny antso izay hananantsika azy. Matetika, ny fatana bioethanol dia mandoro eo anelanelan'ny bioethanol 0.2 sy 0.6 litatra isan'ora. Ity no fanjifana mahazatra ka amin'ny alàlan'ny lasantsy iray litatra dia afaka manana antso avo eo anelanelan'ny 2 sy 5 ora isika.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fatana bioethanol ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Afon-tsolika bioethanol
Fanarenana ny fako